नेकपामा कडा शक्ति–संघर्ष - Khabar Break | Khabar Break
‘तपाईंहरू (ओली, दाहाल र नेपाल)ले एकअर्काको पीडा बुझ्नुपर्‍यो। समस्या के हो पहिचान गर्नुपर्‍यो। दक्षिण अफ्रिकामा एकले अर्काको समस्यालाई महसुस गर्ने हुँदोरहेछ। त्यसलाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘तपाईंहरूको के–के कुरामा असन्तुष्टि हो ? समस्या के–केमा हो ? त्यो पहिचान गर्नुहोस्। त्यसपछि हल गर्ने विधि खोज्नुपर्छ।’ कृषिमन्त्री भुसालले पार्टीले गर्ने निर्णय सबै नेताले मानेर जाने संस्कारको विकास भए विवाद समाधानको बाटो खुल्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए। भुसालले भने, ‘पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउनुपर्‍यो। पार्टीले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्नुभयो भने मेरो सधंै तपाईंलाई साथ छ, अब पनि रहन्छ। तर, पार्टी निर्णय नमान्ने, आफ्नो ढंगले चल्ने गर्नुभयो भने मेरो साथ तपार्इंलाई हँुदैन।’
‘उहाँले समूह–समूहमा स्थायी समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गर्न खोजेको छु, पहिलो चरणमा तपाईंहरूसँग छलफल गर्न खोजेको हो। कसरी पार्टीभित्र देखापरेको समस्या हल गर्ने तपाईंहरूको सुझाव दिनुहोस् भन्नुभयो। हामीले नेताहरुका बीचको आपसी संवाद र विश्वासबाटै समस्याको समाधान खोजी गर्न सुझाव दियौं’, थापाले अन्नपूर्णसँग भने। बिहानको बालुवाटार छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने प्रधानमन्त्रीको तहबाट १४ असारमा दिएको अभिव्यक्ति नदिएको भए राम्रो हुने आफूलाई पनि लागेको बताएका थिए। तर, उनले अभिव्यक्तिलाई अब धेरै उचाल्नेभन्दा पनि त्यसको कमजोरीलाई स्वीकारेर प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा भन्न खोजेको विषय प्रस्ट्याएर जाँदा समस्याको समाधान हुने सुझाव दिएका थिए। रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका चारवटै विषयगत समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री राजपक्षलाई बधाई ज्ञापन
नारायणकाजीलाई विष्णु रिमालले भने: कम से कम पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुस
सर्वोच्चको अर्को विवादस्पद निर्णय: कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या आरोप लागेका बटालालाई सफाइ
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्य दोब्बर बनाउँदै, १० लाख पुर्‍याउने
संक्रमित नै सम्पर्कबाहिर
राजासहितको प्रजातन्त्र नै उत्तम व्यवस्था: अध्यक्ष कमल थापा